Wax ma qabsan karnaa inagoo dawlad wax ka sugin?? Gurmad-qaran - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Wax ma qabsan karnaa inagoo dawlad wax ka sugin?? Gurmad-qaran
Barnaamijkan Gurmad Qaran, waa Barnaamij baaxad weyn oo ka soo bilowday koox dhalinyaro ah oo is abaabushay, kadib xasuuqii lagu dhammaaday ee Sabtidii 14-kii October lagu gumaadey dadkeena magaalada Muqdisho.
Kooxdan dhalinyarada ah ayaa waxa ay sameynayaan in intii karaankooda ah ay gacan siiyaan Ehelada dadkii ku waxyeeloobay xasuuqaas, kaasi oo sababay in dadka qaar uu jirkooda bedelmo oo ay kala go’aan.
Dhalinyaradan oo ku shaqeysa xaruntii hore ee Hargaha iyo saamaha ayaa waxaa ay sameeyaan in ay uruuriyaan xogta la xiriirta Qaraxa, in dadka dhaawacyada ah ay dhiig u shubaan iyo in ehelada raadineysa dadkooda ay isku xiraan.
Muna Xasan Maxamed waxa ay ka mid tahay Dhalinyarada Gurmad Qaran, waxa ay sharaxday inta qeyb ee ay ka kooban dhalinyarada ka shaqeyneysa Barnaamijka Gurmad Qaran.
Dhalinyarada Gurmad Qaran ayaa sidoo kale sheegay in isbitaalada inta badan ee ku yaalla Muqdisho ay la shaqeynayaan, qaarkoodna ay lacag la’aan ka dhigeen adeegyada ay bixinayaan, waxayna intaas ku dareen in ay wadaan kala sooc ku aadan dadka Isbitaalada ku jira ee u baahan raashiinka iyo Daawada.
Dhanka kale Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo oo booqday Xarunta Gurmad Qaran ayaa khadka teleefanka kula hadlay dad soo wacay xarunta oo baadi goobaaya dad ay ilaa haatan ku la’yihiin qaraxii.
Tani waxay muujinaysaa haddii dadku fekeraan in ay wax badan wanaajin karaan ayagoo wax ka sugin dawlada oo hawlaheedu balaaran yihiin baahi kastana dabooli Karin.